Izityalo nezilwanyana zaseGrisi, ngaba awuzazi? Ukungena! | Ukuhamba kwe-Absolut
Iintyatyambo nezilwanyana zaseGrisi
UMonica sanchez | | EGrisi
La uhlobo onokulufumana eGrisi Iyachukumisa, kwaye ngumbutho ongekho phantsi kukarhulumente i-WWF, le ndawo yahlulwe phakathi ecoregion ezimbini ezinkulu, nganye inezinto zayo ezizodwa eziyenza yahluke.
Ukuze ulonwabele ilizwe ngakumbi, ndiza kukuxelela Uninzi lwezityalo kunye nezilwanyana zaseGrisi. Sukuphoswa yiyo.
Njengoko besesitshilo, indawo leyo yahlulwe phakathi kweecoregion ezimbini ezinkulu, ezizezi:
1 Ihlathi lomthi onzima
2 Ihlathi leMeditera
Ihlathi lomthi onzima
Kwelinye icala yahlulwe yaya kwi ihlathi le-balkan elixubeneyo lasezantsi kunye ihlathi elidibeneyo leentaba ze-rhodope. Imozulu kwezi ndawo ipholile, nto leyo ethetha ukuba amaqondo obushushu ahlala ethambile unyaka wonke, kwaye ebusika kukho iqabaka.
Iintyatyambo nezilwanyana zase Greek zala mahlathi ziye zakwazi ukumelana neemeko ezithile, ngendlela yokuba izinga lokukhula lihlale licotha, ngakumbi elezityalo. Kodwa makhe sijonge ngokweenkcukacha ezingakumbi:
Phakathi kwezona ntyatyambo ziqhelekileyo kula mahlathi apholileyo amaGrike sibalaselisa imithi emi ngolu hlobo:
I-White fir (Abies alba): I-conifer ekhula kancinci kunye nepiramidi ethwala efikelela kubude obumalunga ne-60m.
I-carpe yaseMpuma (iCarpinus orientalis): Ngumthi onqabileyo ofikelela kubude obuziimitha ezili-10. Inokufumaneka ecaleni kwe-beech, njengoko zombini zifuna imozulu epholileyo ukukhula.
Imoto emhlophe (Carpinus betulus): ngumthi oqhelekileyo oqabulayo kumahlathi athobekileyo, okhula ngaphezulu kweemitha ezingama-600 ngaphezulu komphakamo wolwandle. Ifikelela kubude beemitha ezingama-25, ubuninzi be-30m, kwaye ngamanye amaxesha inokufunyanwa ikhula ecaleni kwemithi ye-beech.
I-Beech (Fagus sylvatica): Ngumthi okhula kancinci, onqabileyo ofikelela kubude beemitha ezingama-40. EGrisi ifunyanwa isenza amahlathi ePilio.
I-oki yeTrojan (iQuercus trojana): Ngumthi okhula kancinci, onqabileyo ofikelela kubude obumalunga neemitha ezingama-20.
Kula mahlathi kuhlala i Iibhere ezimdaka, Izirhubuluzi ezininzi ziyathanda amacikilishe, iingwamza, inyoka yenyoka o irhamba lamarhambakunye ibhokhwe yasezintabeni emhlophe kunqabile kakhulu ukuba uya kufumana eGrisi kuphela, ngakumbi kumwonyo waseSamariya.
Olu hlobo lwehlathi lwahlulwe lwaba ziindidi ezine: Ihlathi lase-Illyrian elinqabileyo, ihlathi elixubileyo leeNtaba zePindo, Ihlathi laseMeditera laseKrete kunye sclerophyllous kunye nehlathi elixubileyo laseAegean nasentshona Turkey.
Iintyatyambo nezilwanyana ozibonayo ziyazi ukuba zihlala njani kwindawo apho imvula ingasoloko isiwa ngobuninzi, kwaye apho amaqondo obushushu anokunyuka kakhulu ehlotyeni. Ke, ezona ntlobo zimeleyo zezi:
Phakathi kwezona ntyatyambo zimeleyo kumahlathi eMeditera, sigxininisa kwezi zityalo ziluncedo ebantwini:
IAlmond (iPrunus dulcis): Lo ngumthi onqabileyo okhula uye kubude obuyi-7m kwaye uvelise amandongomane amnandi: iiamangile.
Umhla (Phoenix dactylifera): Ngumthi wesundu okhula ngokukhawuleza onokufikelela kubude beemitha ezili-10. Iyalinywa kuwo wonke ummandla weMeditera ngokuchasene nembalela kunye nemihla yayo.
Umkhiwane (Ficus carica): Ngumthi onqabileyo ofikelela kubude obuyi-6m kwaye unamazinga okukhula ngokukhawuleza kwaye neziqhamo zawo, amakhiwane, nazo ziyatyiwa.
Irharnati (iPunica granatum): Ngumthi ohombise kakhulu ovelisa iziqhamo, iirharnate, ezityiwa ngabantu. Ikhula ngokukhawuleza kakhulu ukuya kubude be-5-6m.
Umthi womnquma (Olea europaea): Ngumthi ohlala uluhlaza ofikelela kubude obuziimitha ezi-5-6, kwaye uvelisa isixa esikhulu seminquma.
Nangona ngaphandle kokulibala iintyatyambo ezinika umbala kubume bembonakalo yomhlaba, njenge anemones, i i-tulips, Las iimfusa okanye daffodils.
Kwimozulu enokuba nzima kubomi bezilwanyana, kuyathakazelisa ukuqaqambisa iintlobo ezahlukeneyo zezilwanyana onokuzifumana kula mahlathi, anje ngala Iingqungquthela, Las oonomatse abomdaka, iimpungutye, Oodyakalashe, Ixhama, iindlovu.
Ubomi elwandle ... nasezulwini
Malunga nolwandle, ukuba uyantywila uza kubona mullet, iikreyifishi, isikwati, oopopus, i-shrimp, oononkala, iimbaza, amaqhuqhuva kwaye dolphin.
Ukuba sithetha ngeentaka, iGrisi inokuqhayisa ngokuba yindawo yokudibana okanye inqaku lendawo uninzi lwayo, ke ukuba ufuna ukubona -okanye uzame ubuncinci 🙂 - izikhova, ebusuku, Amadada, iintaka ezihambayo, pheasants, iingcuka o ookhetshe, ungathandabuzi ukuya kweli lizwe elinobutyebi bezilwanyana nezityalo.
Kwimihlaba yayo kukho ubuninzi bezilwanyana kunye nobutyebi bezityalo, kangangokuba bakhona Zili-5500 iintlobo zezityalo, Isisu 116, 422 intaka, Iintlanzi ezili-126, Izirhubuluzi ezingama-60 y 20 zasemanzini. Kuyamangalisa, akunjalo?
Ke ngoku uyazi, ukuba ungumthandi wokhenketho lwendalo kwaye ufuna ukubona zonke iintlobo zezityalo nezilwanyana eziqhelekileyo kwikona nganye yommandla waseGrisi, ungathandabuzi ukubhukisha itikiti ukuchitha iholide engalibalekiyo. Awuyi kuzisola.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Iintyatyambo nezilwanyana zaseGrisi
Le ntyatyambo inqabile kakhulu kodwa iya kuba njalo ngakumbi ukuba igama layo alizange liviwe eMexico
kwaye bekuya kuba sisityalo esingaziwayo
Ndicinga ukuba baya kuba ngcono ukwenza oku kungena kwibhlog yabo, kuba ngokwayo kususa lonke ikhredithi kwinto umntu anokuqhubeka nokufunda kuyo.
Phendula u hala
yonke into abayibhalayo ngamampunge
kodwa abanye abayenzi
jonga kuba akukho mntu ufuna ukuba ngumhlobo wam okanye umhlobo wonke umntu uyandicaphukela kuba
Baye bandibuza umbuzo kwaye andinalo nofifi malunga nawo, ungandinceda? umbuzo ngulo:
Yiyiphi intyatyambo yakudala kunye / okanye yangoku kunye / okanye izilwanyana ezibambe umdla wakho?
Molo, igama lam ndinguPatrick
Molo, igama lam ndinguPatrick kwaye ngubani amagama akho?
Akukho namnye kwabo bangenantlonelo ofanele ukungena kweli phepha kuba ulwazi olunikiweyo luluncedo kwaye abayamkeli inyani
Yeyiphi iliza elibi kunye nabo bonke
Indawo yokuhlala yaseTaino
Iikona eziyimfihlo zeAmsterdam ... ekungekho mntu waziyo